Vidio: Nchọpụta Injin Nchọpụta Maka Mmalite | Martech Zone
Vidio: Nnyocha Nchọgharị Nchọpụta maka Mmalite
Sunday, Jenụwarị 13, 2013 Sunday, Jenụwarị 13, 2013 Douglas Karr
N’ikpeazụ ị malitere mmalite ala mana onweghị onye nwere ike ịchọta gị na nsonaazụ ọchụchọ ọ bụla. Ebe ọ bụ na anyị na-arụ ọrụ na ọtụtụ mmalite, nke a bụ nnukwu okwu… elekere na-akụ ma ịkwesịrị ịnweta ego. Chọta na ọchụchọ dị ọnụ ala karịa ị nweta ego ndị otu na-apụ apụ. Agbanyeghị, Google enweghị ụdị obiọma na ngalaba ọhụrụ. Na vidiyo a, Maile Ohye si Google na-atụle ihe ị ga - eme iji nyere aka.
www - Kpebie ma ị ga-amasị gị ngalaba ịmalite site na www ma ọ bụ na ọ bụghị. Jide n'aka na ịgbanwee okporo ụzọ na nke ị họrọ na redirect 301 (na-adịgide adịgide).
Webmasters - jide n'aka na debanye aha gị na Google Search Console Tools ma chọpụta ma ị nwere nsogbu ọ bụla na saịtị gị.
mata - Maile na-atụ aro ịbanye maka Webmaster Alerts nke mere na a gwara gị oge ọ bụla nsogbu dị na saịtị gị.
domain - ọ na-atụ aro ka ị na-eme a ndabere ego nke gị na ngalaba iji hụ na saịtị ahụ bụ mgbe nsogbu tupu ị na-ahọpụta ya. Spam, malware, ọdịnaya na-adịghị mma… nke ọ bụla n'ime nsogbu ndị ahụ nwere ike imebi ohere ị nwere ọkwa. Ọ bụrụ na enwere nsogbu, ị nwere ike gwa Google site na Webmasters na onye nwe ya na-achịkwa ngalaba ahụ ugbu a.
Nwabata - n'ime Webmasters, kpọtara gị peeji nke iji hụ na engines ọchụchọ agaghị abanye n'ime nsogbu ndị na-akpụgharị na saịtị gị.
Nyefere - ọ bụrụ na enweghị nsogbu, nyefee peeji nke Google. Ọ bụrụ na ị na-ewu gị na saịtị ahụ na a nnukwu usoro njikwa ọdịnaya, CMS ga-emere gị nke a oge ọ bụla ị bipụtara ọdịnaya ọhụụ ma ọ bụ nke emelitere.
Analytics - tinye nchịkọta gaa na saịtị gị ka ị nwee ike ịmalite ịnakọta data dị mkpa site na saịtị gị - hụ na ị nwere ọganihu ma na-eme ka ndozi dabere na nsonaazụ ya. Ma ị na-eji nchịkọta Google ma ọ bụ na ọ bụghị, m ka ga-eme ya ebe ọ nwere Webmaster, nyocha ịkwụ ụgwọ na data mmekọrịta gị nchịkọta ikpo okwu enweghị ike ịgụnye.
Design - mepee atụmatụ weebụ nke na-egbo mkpa ndị ọbịa weebụ gị ma na-akwaga ha na azụmahịa gị. Mfe igodo, otu ibe maka echiche, na imepụta ndị ọkachamara ga-eme ka ị banyekwuo gị.
akakabarede - kedu ka weebụsaịtị gị ga-esi gbanwee atụmanya n'ime ndị ahịa ma ọ bụ chụpụ ahịa ọzọ site na ndị ahịa ugbu a? Jide n'aka na enwere ntụgharị ntụgharị maka saịtị gị - yana maka mmesịa ka mma, tinye Nchịkọta ntụgharị Google Analytics.
Keywords - Nchọgharị ọchụchọ ga-edepụta saịtị gị nke ọma ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịghọta ihe saịtị na ibe gị gbasara. Nweta ụfọdụ enyemaka ndị ọkachamara n'ịchọta isiokwu maka ụlọ ọrụ gị yana ahu nagide Keywords n'ụzọ dị irè n'ime gị na saịtị.
Speed - Gbaa mbọ hụ na nke gị saịtị ahụ bụ ngwa ngwa. Adịghị ahọrọ onye na-akwụ ụgwọ kachasị dị ala, ha na-etinye saịtị gị na ihe nkesa na-arụ ọrụ nke ga-emerụ ma njikarịcha njin ọchụchọ gị na ndidi nke ndị ọbịa gị.
Enwere ọnyà SEO
SEO - ịnye onye na-agba ndụmọdụ SEO nwere ike imebi emebi karịa nke ọma na saịtị gị. Kwere onye ndụmọdụ na-aghọta ma na-agbaso Usoro Ọrụ Google.
Ighaghachi azụ - Zere atụmatụ njikọ ma ọ bụ ịzụ njikọ iji nwekwuo Pagerank. Nke a na-abụkarị ụzọ aghụghọ maka ụlọ ọrụ SEO iji wuo ọkwa gị. Pay na-akwụ ha ụgwọ ka ha kesaa ọdịnaya anaghị ekpughere gburugburu weebụ ka ha nwee ike itinye njikọ na ọdịnaya ahụ.
mfe - gbado anya na saịtị dị mfe nke na-ewepụta ozi nye onye na - agụ ya na onye ọrụ nyocha ya. Ebe nrụọrụ dị mgbagwoju anya nwere ike ịchọ oge karịa, belata saịtị ahụ, ma zoo ọdịnaya dị mkpa nke igwe ọchụchọ na-achọ ịghọta ọdịnaya gị nke ọma.
Chọta na họọrọ ka dabere na saịtị gị. Google agagh atukwasi gi obi ma tinye gi n’ime uzo # 1 maka mpi, okwu di nkpa. Kwalite saịtị gị dị oke mkpa iji nweta visibiliti na engines ọchụchọ. Jide n'aka na kesaa URL gị na mbipụta ọ bụla ma ọ bụ akụkọ edere banyere saịtị gị. Debanye aha gị na saịtị maka Google+, Facebook, LinkedIn, Twitter wee bido itinye aka na atụmanya gị, ndị ọrụ ibe gị, ndị na - eme ihe ike na ndị ọrụ gị n'ịntanetị - ịkwalite ọdịnaya ị na-ede.
Tags: njikọnkwaliten'usorosearch engine njikarịchachọọ ahịa maka mmaliteseo maka mmalitestartups
Mmetụta nke Mobile na Mbadamba onyinye
Otutu ngalaba na SPF Dekọọ gị